ISIGCOTSHIWE INKOSI YAMANTUNGWA - Ilanga News
Home Izindaba ISIGCOTSHIWE INKOSI YAMANTUNGWA
ISIGCOTSHIWE INKOSI YAMANTUNGWA
IGCOTSHWE ngokusemthethweni iNkosi Nhloso Khumalo (21), esencane kunawo wonke amakhosi KwaZulu-Natal, ethembise ukuba ngumholi oqotho nozobhekelela inhlalakahle yabantu besizwe soyisemkhulu. INkosi Khumalo yobukhosi bamaNtungwa-Kholwa, eMnambithi, igcotshwe emcimbini obuseDriefontein ngoLwesibili ithatha isihlalo ebesibanjwe ngunina, uNdlunkulu Thembekile Ruth Khumalo, owadlula ngoNcwaba (August) nonyaka, emuva kokugula isikhashana.
Emcimbini wokubekwa kwayo, bekukhona uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana nezoMdabu KwaZulu-Natal, uMnu Sipho Hlomuka ehambisana neMeya yasoThukela, uMnu Ntandoyenkosi Shabalala namakhosi akhele le ndawo. INkosi Khumalo ithembise ukusebenzisana nezinhlaka zikahulumeni ezahlukene ukuqinisekisa inqubekela phambili nentuthuko endaweni yayo. “Njengenkosi kule ndawo, kuyangithobisa kakhulu ukubekwa kulesi sihlalo namhlanje engikholwa wukuthi ngisinikwe nguMdali ukuba ngihole abantu bakhe.
“Ngizazi kahle izingqinamba abantu bakule ndawo ababhekene nazo njengoba nami ngiyisakhamuzi sakhona. Isifiso sami wukuthi sisebenze ngokubambisana ukubhekana ngqo nazo. “Phakathi kwazo yizibalo eziphezulu zentsha engasebenzi, wukuhlukunyezwa nokubulawa kwentsha nezingane, wukukhulisa indawo yakithi nokuthi intuthuko ifinyelele lapho kufanele ifinyelele khona,” kusho yena. UMnu Hlomuka ubonge umndeni wasebukhosini bamaNtungwa-Kholwa ngokuqinisekisa ukuthi kawuthathi isikhathi eside kungekho ohleli esihlalweni sobukhosi. Unxuse umphakathi ukuqhubeka nokweseka inkosi njengoba isencane kangaka.
Previous articleBafuna kuhlehliswe esewashi
Next articleKuboshwe ikhansela nomshana ngelokufa kwabawu-3